विद्रोहको क्यानभासमा - शखदा साहित्य
रोस्मन लिम्बु said...
शर्मीला जी तपाई मेरो अत्यन्तै मनपर्ने लेखक हुनुहुन्छ । तपाईले लेख्नुभएको कथाहरु भेटेँसम्म सबै पढ्ने गरेको छु । म सल्यानी ठिटो हुँ हाल काठमाण्डौंमा छु । ब्लग संचालन गर्नुभएको रहेछ अब त रचना पढ्नका लागि भौतारिनु पर्ने नभयो । सफलताको शुभकामना छ तपाईलाई । ब्लगलाई निरन्तरता दिनुहोला ।
कृष्ण कट्टेल, सल्यान said...
कथा निकै सरल मिठासपूर्ण लाग्यो शर्मिला जी मलाई । मेरो सहकर्मी मित्र मनोजले तपाईको बालपुस्तक मेरी छोरीलाई दिनुभएको रहेछ । उनले तपाईको पुस्तक निकै मन पराई । तपाईका अन्य बालपुस्तकहरु दर्जनौ जति पुस्तकपसलहरुमा खोजेँ पाउन सकिँन । आज इन्टरनेटमा डुल्दै जाँदा तपाईको ब्लगमा डुबुल्की मार्न पुगेँ । अब नियमित पढिन्छ । शुभकामना हैँ ।
यम जागाली said...
शर्मिला जी तपाईका प्रयाशः कथाहरु प्रेम र यौन बासनाले भरिपूर्ण भएको पाइन्छ । म यौन मनोवैज्ञानिक कथाहरु पढ्न रुचाउँछु । हदैको अश्लिलता भनै पटकै मनपर्दैन जसले उत्तेजना बाहेक अरु केही सिकाउँदैन । मानिसहरुमा माझ यौनका बारेमा सर्किण सोचाई हुन्छ त्यो मलाई मन पर्दैन् । ‘समयको क्यानभासमा’को फ्रेम भित्रको फोटो भन्ने कथा निकै राम्रो लाग्यो । अझ लेख्दै जानुहोला ।
सीता सन्ध्या राई said...
निकै दिनदेखि हेर्दैछु तपाईको ब्लग धेरै रचनाहरुले भरिदै छन् । तपाईको कति छिटो रचना गर्नुहुन्छ हँ ? कि पहिलेदेखि नै स्टक थियो तपाईसँग ।
रचना श्रेष्ठ said...
म पनि एकाध मात्रामा कथाहरु लेख्ने गर्छु । आफुलाई पढ्दा कथा राम्रो लाग्छ । बिभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा पठाउछु प्रकाशित हुँदैन । गरिमा र मधुपर्कमा निकै पठाईसके छापिएन । के रचना प्रकाशित गर्न पनि चाकडी गर्नुपर्छ हो ? कथाका लागि धन्याबाद शर्मिला जी ।
दिपनारायण चौधरी said...
वेबसाइट निकै राम्रो लाग्यो मलाई । रचनाहरु पनि सबै उत्कृष्ठ लागे मलाई सफलताको शुभकामना ।
सुशिल कोइराला said...
मेरी श्रीमति अनिता तपाईको ‘फ्यान’ छिन् । तपाईका पुस्तकका कथाहरु निकै पटक दोहो¥याएर पढ्ने गर्दछिन् । के हामीलाई भेट दिनुहुन्छ ?
बसिबियाँलो भाइ said...
हैन शर्मिला जी तपाईको कसरी कथा सिर्जना गर्नुहुन्छ । आफ्नो यो खोपडीमा के आउँदैन बा ? कथा निकै राम्रो लाग्यो । अरु पनि पढ्न पाएँ हून्थ्यो ।
बिष्णु रिसाल said...
शर्मिला दिदी तपाईको पुस्तक ‘समयको क्यानभासमा’ पढेर सिध्याएँ । अब तपाई के प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ ? छिटो है ।
I read your stories. They are excellent.
Devendra Bhandari, Canada
Thank you Devendra jee, Itsagreat honour for me, as Ive been least able to satisfy my readers , it boosted up effort to do my best in future,